I-puppy inesifo sohudo - yini okufanele uyenze?
Ukuze uthole ukuthi kungani i-puppy inesifo sohudo, futhi ukuhlola ukuthi isimo sibi kangakanani, kufanele uthintane ngokushesha nodokotela wezilwane. Njengomthetho, isifo sohudo ku-puppy senzelwa izizathu ezintathu eziyinhloko:
ukutholakala kwezibungu . Ukwelashwa kuvame ukuvela esibelethweni, noma ngobisi.
izinguquko ekudleni. Inyama nezinhlanzi zivela ekudleni, zihamba emgwaqweni ziqala, lapho i-puppy ingakhetha okuthile emhlabathini ongesiwo ongcono.
ukutheleleka. I-enteritis engakaze ibekezelele kalula, isifo.
Lezi zizathu ezintathu zingenzeka ngesikhathi esisodwa, zingenziwa kuphela ochwepheshe. Ukuzivocavoca kuyingozi kulezo zimo uma isifo sohudo sihambisana nomkhuhlane, ukuhlanza, ukuphuma emakhaleni, ukuphelelwa amandla nokulahla kokudla namanzi.
Ukuhuda isisu kumantombazane asanda kuzalwa kungabangelwa ubisi lomama wabo. Kulesi simo, kufanele uhambise le puppy ekudleni okufakelwayo.
Ukudonsa igazi ku-puppy kungabangela kokubili ukutheleleka okuyingozi kanye nokulimala komshini ezindongeni zokuvuleka komzimba noma emathunjini, okhathazekile yimiphetho ebukhali yamathambo adliwa yi-puppy. Kunoma yikuphi, isifo sohudo sinesizathu esibucayi sokuhlolwa okuphelele kwesilwane, ngoba lesi sibonakaliso singabangelwa isifo esibulalayo futhi insizwa ingasizwa uma isikhathi singasetshenzisiwe.
Ungasiza kanjani i-puppy?
Ukuze unqume ukuthi yini yokunikeza i-puppy isifo sohudo, kuyinto efiselekayo ukucacisa kulokho okuqalisiwe. Uma kunesibindi sokuthi isifo sohudo sibangelwa ukuguqulwa kokudla, noma ubisi lomama onesihlengikazi, khona-ke i-puppy kufanele igcinwe ekudleni kokulamba okungenani amahora angu-12, uma kunesidingo, unike ama-antispasmodics ukuxazulula ubuhlungu esiswini. Futhi, kufanelekile ukunikeza amalahle asetshenzisiwe nge-puppy nokunikeza isiphuzo esiningi ukuze ugweme ukuphelelwa amanzi. Emva kokuyeka uhudo, kufanele ukondle i-puppy ngokudla okunamafutha aphansi, unike isilwane umhluzi ophuzile, ilayisi, i-kefir.
Uma isifo sohudo sibangelwa ngenxa yokugaya ukudla okuncane, ngakho-ke njalo ngemva kwamahora amathathu unganika iSmekty i-spoonful. Ngemuva kokudla okufutshane, ifomula yokudla kumele ihlanjululwe kuphela ngamanzi, ngokungezwa kwe-glucose, ukugwema ubisi. Ungazame ukuphatha leli puppy, kuphela lapho kungekho ukushisa, ukuhlanza kanye negazi.
Uma, ngemva kokuba zonke izinyathelo zithathwe, isifo sohudo siyaqhubeka, singaba uphawu oluphawulekayo lokugula okungapheli, ukutheleleka, ukushaywa umoya, ukungena kwamanye amazwe, nezinye izinkinga eziningi ezidinga ukungenelela kwezilwane zezilwane nokuqokwa kokwelashwa okufanele.
Isifo sohudo ekunciphiseni i-parrot - ukwelashwa ekhaya
Inja inqabe imilenze yangemva
Indlela yokukala ukushisa kwekati?
Indlela yokwenza i-aviary ngenja?
Ungabiza kanjani ikati laseBrithani?
Yini ongayidla iminenki ye-aquarium?
I-Alaskan Malamute - umlingiswa
I jeans yabesifazane ngezinwele
Ukulungiselela okusha kwe-migraine
Isitayela se-Chalet endlini yezwe
Kungenzeka yini ukuthi ukhulelwe ekugeza?
Izinsuku zikhula kuphi?
Ungenza kanjani i-curls yokugaya?
Ngaphambili - ukwelashwa ekhaya
Izingubo zezimvu zamakhosikazi ze-2016-2017 - amamodeli amfashini nezitayela
I-carrot mask ebusweni
Ukudla Kovalkov - imenyu
Isisekelo esihle sesisekelo
Ibhasi lesibhakela kusuka ku-birch bark
I-fungus endlini yokugezela - ungasusa kanjani futhi uvimbele ukubukeka?
I-sofa ekhishini - khetha isethi ephathekayo nekhululekile
Amapaki abesifazane abanoboya
Izigqoko - Amathrendi 2015